Dzimwe nzira dzekudzivirira hutachiona mukutangisa mbeu mbatatisi
Agrifirm neHZPC vari kubatana muchiuto muchirongwa chekuratidzira inda nemashanga sekudzivirira hutachiona mukurimwa kwezvizvarwa zvekutanga mumbeu mbatatisi. Iwo ndiwo PB1 uye PB2.
hutachiona hutachiona mumbeu mbatatisi yave ichiwedzera mumakore achangopfuura. Matanho ekudzivirira 'akajairwa' akadai sekutanga zvinhu zvine hutano, kusarudzwa, oiri yemaminerari uye mashandisiro eanyowani uye / kana ma pyrethroids vhiki rega haakwanise kuchengetedza hutachiona hweY.
Cornelis de Haas weAgrifirm uye Harm Steenhuis weHZPC vanoona kuti varimi vane dambudziko rekuchengetedza zvinhu zvavo zvekutanga zvisina mavhairasi. Nekuda kweizvozvo, kudiwa kweimwe nzira dzekudzivirira hutachiona muchizvarwa chekutanga kuri kuwedzera. Kune kufarira kuri kuwedzera mukudyara matanho ekurima ayo anotapudza hutachiwana.
Dzimwe nzira dzekurima
Mini tubers yaiwanzo kurimwa muma gauze greenhouses. Iko kusakosha kweichi ndechekuti kumisikidza uye kutora pasi mesh matura anotora nguva yakawanda. Kunyanya nekuti kuwanda kwemini matinji pamurimi kuri kuwedzera, haichabatsiri. Pamusoro pezviyero zvekudzivirira 'zvakajairwa', mamwe matanho ekurima anozivikanwa kudzivirira hutachiona: kurima kwakafukidzwa kana kuisa pevha yehuswa.
Aya matanho ekurima akagadzirira kuyedzwa mukuita. Kune varimi vakasiyana siyana kuGroningen, Friesland, Flevoland neNoord-Holland, muyedzo wekuratidzira urikuiswa nemhando dzakasiyana dzemarara nemachira. Iko kune zvakare kunongedzera block, chinhu chine mineral mafuta uye chinhu chine mineral mafuta pamwe ne mulched mashanga.
'Isu tinoda kuziva nezve mhedzisiro,' anodaro Steenhuis. 'Izvo zvinhu zvakagadzikwa zvisati zvabuda uye canvas inongobviswa chete kana mashizha afa. Nekuda kweizvozvo, isuwo tinobva tangoziva kuti kupfeka kwemachira chii uye kuti mhepo nemhuka dzemusango zvinokuvara sei Asi tinoona zvakare kukura kwesora, kukwana kwevanodzivirira goho uye kusimudzira kwesimba kwezvirwere pakupera kwemwaka. '
HZPC inoronga kuratidzira kwakati wandei gore rega rega, mune mitsva mitsva inoratidzwa kune varimi. Gore rino demo rine micheka nehuswa zviripo. Steenhuis: 'Nenzira iyi tinogona kubva taratidza varimi vedu izvo zvakarimwa pasi pechando kana chifukidziro chesavi zvinoita sekuita. Munguva yemadhongi isu tinoziva zvakare zvakawanda nezvekuti micheka inozvara sei mukuita. Uye vanotevedzera sei. '
Tags: Agrifirmkukura-mhodziHZPCChikamu chembeu yemazamu
YeAustralia yekurima mbatatisi murimi anotarisisa kurima
Bayer: kukuvara kweAltaria mu mbatatisi
KFH Kichigin inosimbisa hutachiona hwembatatisi
Patatas Meléndez akawedzera zvakapetwa zvakapetwa mumakore mashanu apfuura
Varimi vanogona kupihwa mari inosvika zviuru zana zvemadhora kuti vabatsire kuenda pamudyandigere
Tyrrell's Potato Chips yakapihwa kutengeswa
UK Inokura Yako Yako Mbatatisi: Vamiriri vanokweretesa ruoko panguva yekukohwa